Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay qaraxyadii ka dhacay Uganda | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay qaraxyadii ka dhacay Uganda
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay labadii qarax ee lagu dilay laguna dhaawacay tiro askar iyo dad rayid ah oo ka Maalin ka hor ka dhacay Magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri” Soomaaliya oo dhibane u ah weeraradii argagixiso ee lamidka ahaa, waxay tacsi tiiraanyo leh u direysaa qoysaska dhibanayaasha, iyadoo u rajeysay kuwii ku dhaawacmay inay si deg deg ah u bogsadaan, iyadoo ugu baaqday dalalka Afrika inay sameeyaan dadaal abaabulan oo ula kac ah si ay uga hortagaan argagaxisada fikir ahaan iyo abaabul ahaanba.
Qaraxyadii ka dhacay Magaalada Kampala ayaa waxaa ku dhintay lix ruux halka 33 kale ay ku dhaawacmeen, waxaana mas’uuliyadda qaraxyada sheegtay Kooxda IS, iyada oo Madaxweynaha Uganda uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan Kooxdii ka dambeeysay qaraxyadaas.
Dowladda Uganda ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan Askari oo ku howlgalla Magaca howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kuwaas oo Ciidamada dowladda Soomaaliya ka caawiya dagaalka ay kula jiraan Ururka Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay qaraxyadii ka dhacay Uganda was last modified: November 18th, 2021 by warsan radio
Rooble oo baaq deg deg ah u diray Madaxda Afar Dowlad Goboleed
Dhageyso:-Barnaamijka Waxa soo saarka iyo Saameynta Cimilada isbadasho
RW ku xigeenka oo gudoomiyay shir ay ka qeyb galeen Golaha Wasiirrada iyo khubaro